ဧရာဝတီ| November 20, 2012 | Hits:1,354
32 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment myofalcon November 20, 2012 - 6:24 pm	အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့မိန့်ခွန်းအပေါ် ဝေဖဖန်ကြတာတွေဖက် မိတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်မကျတာလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာရှိတယ်.. အဲ့ဒါက ဦးဇိုဇမ် (ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ) ပြောတဲ့ “လူထုရှေ့မှာ စကားပြောတဲ့နေရာမှာ ပါတီကြီးတခုလောက်ကို အမွှန်းတင်လိုက်တာမျိုး။ ကျနော်တို့ ပါတီစုံစနစ်ပါ။ ကျနော်တို့ နားလည်သွားပါတယ်၊ ဘယ်သူ့အတွက် စည်းရုံးရေး လာဆင်းတယ်ဆိုတာကို နားလည်သွားတယ်” ဆိုတဲ့ စကားကိုပါ.. ဦးဇိုဇမ်ကကော အိုဘားမားရဲ့ ခရီးစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ အများကြီး အကျိူးရှိခဲ့တာကို သိပုံမပေါ်ဘူး.. အိုဘားမားက သူ့နံမည်တပ်ပြီး မပြောခဲ့တာကို တော်တော်ခံပြင်းနေပုံရတယ်. သူသာ မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားတာကို မြင်ချင်ရင် မနာလိုတွေဖြစ်စရာမလိုပါဘူး.. ယူတတ်ရင် ရစရာတွေအများကြီးပါ.. နောက်ဆုံးတော့ ဦးဇိုဇမ်က သူ့ ချင်းပြည်နယ်ကောင်းစားရေး၊ သူ့ပါတီ ကောင်းစားရေး၊ သူကောင်းစားထင်ပေါ်ရေးသက်သက်ပဲ အလိုရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်မိပါတယ်.. စစ်အစိုးရ အာဏာရူးတွေနဲ့ တစ်တန်းထဲမဟုတ်ရင်တောင် သိပ်တော့ ကွာမယ်မထင်ဘူး. တစ်မျိုးသားလုံးရေးနဲ့ ခြုံပြီး မမြင်တတ်တဲ့သူလို့ပဲ ထင်မှတ်မိတယ်..